Flydubai dia mandefa ny sidina Dubai-Yangon
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Flydubai dia mandefa ny sidina Dubai-Yangon
Governemanta Dubai-zotram-piaramanidina manana kaonty flydubai nankalaza ny sidina fanokafana ho any Yangon any Myanmar, nanitatra ny tamba-jotra ka tafiditra ao Azia atsimo atsinanana. Ireo sidina isan'andro vaovao dia zaraina kaody miaraka amin'ny Emirates ary hiasa amin'ny Terminal 3 ao Dubai International (DXB). Tao anaty sidina voalohany no nisy ny delegasiona notarihin'i Sudhir Sreedharan, filoha lefitra zokiny, Operations ara-barotra (UAE, GCC, Subcontaine ary Africa) tao flydubai. Rehefa tonga tao Yangon, ny delegasiona dia nihaona tamin'ny Lehiben'ny U Phyo Min Thein, Lehiben'ny Minisitry ny Faritra Yangon, ny Lehibeny Daw Nilar Kyaw, ny minisitry ny herinaratra, ny indostria, ny arabe ary ny fitaterana miaraka amin'i U htun Myint Naing, filohan'ny vondrona eran-tany an'ny orinasa sy Andriamatoa Jose Angeja, COO an'ny Yangon Aerodrome Company Limited.
Niresaka tamin'ny hetsika voalohany Sudhir Sreedharan, filoha lefitra zokiolona, ​​Operations ara-barotra (UAE, GCC, Subcontaine ary Africa) tao amin'ny flydubai, dia nilaza fa: "Faly izahay fa hanomboka ny serivisy vaovao ataonay isan'andro any Yangon, satria hitanay fa nanitatra hatrany Atsinanana ny tambajotran'ny flydubai. Matoky izahay fa ny serivisy vaovao dia tsy hanohana ny fifandraisan'ny mpivarotra na Emirà Arabo Mitambatra sy Myanmar fa ho lasa làlana malaza ho an'ireo mpandeha avy any UAE sy GCC ary ho an'ireo izay mifandray amin'i Eropa sy Etazonia miaraka amin'i Emirates. ”
Nandritra ny lahateny fanokafana nataony tamin'io hetsika io dia nilaza ny Excellency U Phyo Min Thein hoe: Ny seranam-piaramanidina dia vavahady mankany amin'ny dia iraisam-pirenena. Tianay ny handraisana ny fandraisana an-tanana ny sidina voalohany nataon'i flydubai androany ary hisaorana ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany, ary ny fanekena an'i Dubai ho foibe fitaterana iraisampirenena. ”
Merry Chrismukkah! Manomboka amin'ny 2020 ny fizahan-tany Israel miaraka amin'ny hotely sy sidina vaovao
WTTC: Amerika Avaratra dia mandray anjara amin'ny 25% amin'ny harinkarena faobe momba ny fizahantany sy fizahan-tany